ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အနုပညာအလုပ်တွေ ပြန်လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး | Popular
August 9, 2019 Popular
ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ဝေးကွာနေရတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် အရင်အချိန်က ကြော်ငြာဘုရင်မလို့ တင်စားခေါ်ခံရတဲ့ သရုပ်ဆောင်ထက်ထက်မိုးဦးကတော့အနုပညာ အလုပ်တွေပြန်လည်လုပ်ကိုင်လာတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာတာကြောင့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုတွေဆက်တိုက် လုပ်ကိုင်လာတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးက . . .
“အစ်မနောက်ပိုင်းတော့ ရုပ်ရှင်တွေပြန်ရိုက်ကူးဖို့ရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေး အခြေအနေလည်းကောင်းလာပြီဆိုတော့ ရုပ်ရှင်တွေရိုက်မယ်။အနုပညာ အလုပ်တွေဆက်တိုက်လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ရင်လည်း ကာရိုက်တာအရကိုယ့်အ သက်အရွယ်နဲ့လိုက်မယ့်ကာရိုက်တာ ကိုရွေးချယ်ပြီးရိုက်ကူးသွားမယ်။ ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းလာပြီဆိုတော့ ရှေ့ဆက်ပြီးလည်း အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲကျန်တော့တယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေနားဖြစ်သွားတာက လည်း ကျန်းမာရေးကြောင့်ပါ။ကျန်းမာရေး မကောင်းတော့အလုပ်မှာမပျော်ရွှင်ဘူး။အခုကျန်းမာရေးကကောင်းလာပြီဆိုတော့ ထပ်ပြီးကြိုးစား ရမှာပေါ့။လူဆိုတာကတော့ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်ကိုယ်တွန်းအားပေးရတာပေါ့။ငယ်ငယ်ကတည်းကဒီအနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်ချင်တော့ စိတ်ကူးနဲ့ရူးခဲ့ရတာတွေရှိတော့တော်တော် ကြိုးစားခဲ့ရတာတွေရှိတယ်။အခုတော့ အသက်ကြီးလာတော့ နည်းနည်းတော့ ကြိုးစားမှုတွေလျော့လာတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်ပြန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်” လို့ပြောပါတယ်။
အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ အနုပညာမောင်နှမတွေ အတွက် ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ပညာလေးတွေကိုပြန်ပြီးသင်ပြပေးချင်တယ်လို့ထက်ထက်မိုးဦးက . . .
“အသက်အရွယ်ရလာတာတော့ ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ ကလေးတွေကိုနေရာဖယ်ပေးရတာသဘာဝပါပဲ။ အစ်မတို့အနေနဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း အကြီးတွေက အစ်မတို့ အတွက်ဖယ်ပေးရတဲ့နေရာတွေ ရှိတာပဲလေ။အဲ့ဒီအပေါ်မှာစိတ်ထဲ ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့်ငယ်ငယ်တုန်း ကအမှတ်တရတွေက စကားကြုံတိုင်း ပြောမိတယ်။ သတိရမိတယ်။ငယ်ငယ်တုန်း ကဟာတွေတွေးပြီး တစ်ခါတလေပျော်စရာကောင်းခဲ့တယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေလုပ်ခွင့် ရခဲ့တဲ့အချိန်ကတော်တော်ကြည်နူးဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ အရွယ်ကငယ်တော့အလုပ်အကိုင်တွေအများကြီး ရှာဖွေတယ်။ ပိုက်ဆံတွေရရင်မိဘတွေကိုထောက်ပံ့တယ်။မောင်နှမတွေကို ထောက်ပံ့တယ်အရမ်းကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်တွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်း မှာလည်း ကိုယ့်လိုပဲအငယ်တွေကို ကိုယ်တွေ မှာရှိတဲ့ပညာတွေအဓိကသင်ပေးချင်တယ်။ရသလောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ အနုပညာတွေကို ရအောင်လုပ်ပေးချင်ပါတယ်” လို့ပြောပါတယ်။
ဟိုနိုလူလူကျွန်းမှာ သွားရောက်ကပြမယ့် ဝင်းသပြေထွန်း
သရုပျဆောငျနနျးစန်ဒာလှထှနျးရဲ့ မိခငျ ကိုဗဈကူးစကျခံရတာတဈလခှဲ အခြိနျကွာမွငျ့ခဲ့